Xiddig hore kooxda Barcelona ah oo isbar-bardhig ku sameeyay tababarayaasha Koeman iyo Zidane – Gool FM
Dajiye January 16, 2021
(Barcelona) 16 Jan 2021. Xiddigii hore kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Brazil ee Rivaldo ayaa sheegay in Ronald Koeman uu ula dhaqmo ciyaartoyda da’ayarta ah si xasiloon, si ka duwan tababaraha Real Madrid ee Zinedine Zidane, kaasoo ku ciyaara koox xasiloon oo u badan xiddigo da’adooda ay weyn tahay, inkastoo ciyaartoy da’ayar ah ay fadhiyaan kursiga keydka.
Barcelona ayaa u soo baxday finalka Spanish Super Cup, kaddib markii ay ka badisay Real Sociedad, waxaana ay wajihi doonaan Athletic Bilbao, oo iyaduna ka soo adkaatay Real Madrid khamiistii kulankii afar dhamaadka.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay xiddigii hore kooxda Barcelona ee Rivaldo waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Marwalba waxaan sheegaa in furaha maareynta hibada xiddigaha da’ayarta ah waa inaan la saarin wax cadaadis ah iyaga.”
“Waxaan qabaa in Ronald Koeman uu qabanayo shaqo fiican maadaama uu dhalinyarada ku lamaaniyo Lionel Messi, Sergio Busquets iyo Jordi Alba.”
“Koeman wuxuu u qalmaa hambalyo iyo ixtiraam sababa la xiriira maamulida ciyaartoydan, iyadoo ay joogaan ciyaartoy badan oo dhalinyaro ah.”
“Ku guuleysiga Spanish Super Cup waxay sare u qaadi doontaa kalsoonida kooxda inta ka harsan xilli ciyaareedka.”
“Laakiin Zinedine Zidane wuxuu sameeyaa wax ka duwan marka uu ku tiirsan yahay ciyaartoy sida Valverde, Rodrygo iyo Vinícius Júnior.”